Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Jet2 ayaa amartay 15 diyaaradood oo cusub oo A321neo ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Investments • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Diyaarado cusub ayaa loo habeyn doonaa 232 kursi oo leh qol Airspace ah oo leh iftiin cusub, alaab fadhiga cusub iyo 60 boqolkiiba baagag waaweyn oo dusha sare ah oo lagu kaydiyo kaydinta shaqsiyeed.
Amarka cusub wuxuu qaadanayaa amarka guud ee Leeds, United Kingdom, oo ah shirkad diyaaradeed oo fadhigeedu yahay 51 A321neos.
Labada amar ee diyaaraddu waxay ka tarjumayaan ballaarinta hamiga ah ee Jet2.com iyo cusboonaysiinta qorshayaasheeda.
Diyaarado cusub ayaa loo qaabayn doonaa 232 kursi oo leh qol Airspace ah oo leh iftiin cusub.
Jet2.com waxay dalbatay amar dheeri ah oo ah 15 A321neos iyadoo raacaysa tii hore 36 oo la dhigay Ogosto 2021. Waxay qaadataa amarka guud Leeds, United Kingdom, oo ah shirkad diyaaradeed oo fadhigeedu yahay 51 A321neos. Labada amar ayaa ka tarjumaya Jet2.comQorshayaasha ballaarinta iyo hammiga ee hamiga leh. Xulashada matoorka waxaa la samayn doonaa taariikh dambe.
New Jet2.com Diyaaradaha waxaa loo qaabayn doonaa 232 kursi oo leh qol Airspace ah oo ay ka muuqdaan nalal hal -abuur leh, alaab fadhiga cusub ah iyo 60 boqolkiiba weelal waaweyn oo dusha sare ah oo lagu kaydiyo kaydinta shaqsiyeed.
Qoyska A320neo wuxuu ku darayaa farsamooyinkii ugu dambeeyay, oo ay ku jiraan matoorada jiilka cusub iyo Sharklets, iyagoo keenaya boqolkiiba 20 dhimista isticmaalka shidaalka halkii kursi. Iyada oo leh baaxad dheeri ah oo gaareysa 500 nautical miles/900 km. ama laba tan oo culays dheeraad ah, A321neo ayaa gaarsiin doonta Jet2.com oo leh awood dakhli oo dheeri ah.
Dhamaadkii Ogosto 2021, Qoyska A320neo waxay ka guuleysteen in ka badan 7,500 oo amarro adag ah oo ay ka heleen in ka badan 120 macmiil oo adduunka ah.
Jet2.com Xaddidan, oo sidoo kale loo yaqaan Jet2, waa diyaarad firaaqo oo raqiis ah oo Ingiriis ah oo bixisa duulimaadyo jadwal ah iyo kuwo kiro ah oo ka socda Boqortooyada Ingiriiska. Laga bilaabo sannadka 2019, waa diyaaradda saddexaad ee ugu ballaadhan qorshaysan ee UK, oo ka dambaysa EasyJet iyo British Airways.
Qoyska Airbus A320neo waa horumarin ka tirsan qoyska A320 ee diyaarado cidhiidhi ah oo ay soo saartay Airbus. Qoyska A320neo wuxuu ku salaysan yahay A319 hore, A320 iyo A321, oo loo beddelay A320ceo, oo loogu talagalay "ikhtiyaarka mishiinka hadda".